कहाँ हराईन यी हिरोइन ? |
कहाँ हराईन यी हिरोइन ?
Posted on January 13, 2010 by Yonepal
नेपाली चलचित्रमा ग्ल्यामरसको क्षेत्रमा आफ्नौ छ्ट्टै पहिचान बनाउन सफल नायिका पूजना प्रधान अहिले चलचित्र क्षेत्रमा अलि कम छाउन थालेकी छन्।
उनलाई अहिले फिल्मको अफर आउन नसकेको हो वा आएको अफर स्वीटेबल नभएर हो?
कहिले भोजपुरी फिल्ममा पनि व्यस्त हुने नायिका नेपाली कथानक चलिचित्रमा भने कम छाउनुमा पूजनाका फ्यानहरुका लागि दुःखको कुरा हो। उनलाई फिल्मा लिए पनि आइटम गितमा लिइन्छ ग्ल्यामरसको भूमिकामा ।
« नेपाली चलचित्रमा नयाँ नायिका रुदै घर गए लडाकुहरु »